Sayenzi | Network Meteorology
Nyika ye ciencia inovhara ruzivo rwakawanda, apa isu tichaedza kukupa iwe rwese ruzivo rwakakosha kuti unakirwe nesainzi ku mamiriro ekunzeIsu tinoshuvira kuti iwe unakirwe nezvose uye kuti iwe haukanganwe kuti kunyatsoziva izvo zvakatikomberedza nguva dzese kunoita kuti tiwedzere kutonga mumamiriro ezvinhu.
Data, ruzivo mune zvese, zvakasikwa zviitiko uye yakareba etc. Izvo zvinoita kuti ino nzvimbo ive yakanaka nzvimbo yekunakidzwa neruzivo mune zvakajairika uye ndiani anoziva, kumutsa chimwe chinhu kubva mukati medu chinoita kuti tifarire nechinhu chakaoma senge sainzi.
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 2 mazuva .
Iyo Arctic glacial ocean ndiyo inowanikwa munzvimbo yekuchamhembe kwepasi redu. Ndafunga…
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 1 vhiki .
Gungwa reGarirea rinozivikanwa munzvimbo zhinji dzepasi segungwa, asi mune mamwe matunhu inozivikanwa se ...
Nyika yedu ine muviri wekudenga unotenderera pamusoro pawo unozivikanwa semwedzi. Nekudaro, kuchine ...
Rwizi rweNile rwizi rwenyika dzese, rwunopfuura makiromita zviuru zvitanhatu, runoyambuka nyika gumi kukondinendi ...
Kunyangwe ichokwadi mvura yese yepanyika yakafanana, munhu akapatsanura mvura idzi kuita makungwa uye ...
Pakati pezvisikwa zvipenyu zvekukosha kukuru kwezvakatipoteredza nekuchengetedza zvipenyu zvakasiyana, pane materu. Chinangwa chegore ...
Kwenguva yakati rebei, zvave kuzivikanwa kuti Mars ine mvura mukati mayo. Izvo zvisingazivikanwe ...
kubudikidza ChiGerman Portillo inoita 3 mwedzi .
Mumunda wefizikisi fizikisi, akasiyana marudzi e radiation aripo anofundwa. Mune ino kesi, ngati ...
Ozone layer kuparadza
Pakati pezvikamu zvemuchadenga zvatiinazvo pane chimwe chinotidzivirira kubva kumwaranzi inokuvadza yezuva….
Kana tichidana zita reKrakatoa tiri kureva chitsuwa chinoputika chiri munzvimbo yakamanikana ...
Munhu haana kuneta mukutsvaga hupenyu pane imwe nyika mune yedu yezuva uye ...
Nguva yeMesozoic: zvese zvaunoda kuti uzive
Precambrian Eon: zvese zvaunoda kuti uzive
Cenozoic Era: Zvese Zvaunoda Kuti Uzive
Iyo glaciation uye chando zera
Maitiro ekuverenga uye kunzwisisa mepu yemamiriro ekunze
Ndiani Alfred Wegener?
Chii chinonzi geological nguva uye inoyerwa sei?
Mhando dzedombo, kuumbwa uye hunhu
Chii chiri kushandura zvikanganiso uye zvakaumbwa sei
Oceanic ridge: mavambo, hunhu uye simba
Chii icho, maumbirwo ayo uye hunhu hwechando
Sei madonhwe emvura achiumbwa uye ndeapi maumbirwo avanogona kuve nawo?
Ndezvipi izvi, zvakaumbwa sei uye mhando dzemafungu